आजको राशिफल २०७६ साल जेठ २९ गते बुधवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ जुन १२ तारिक। - Gulf Sandesh
आजको राशिफल २०७६ साल जेठ २९ गते बुधवार नेपाल सम्बत ११३९ सन् २०१९ जुन १२ तारिक।
मिथुनः– समयले साथ दिने छैन । गलत सवित गराउन खोज्दै छन् सर्तक रहनुहोला । दैनिक काममा अवरोध आउने देखिन्छ । समस्याको वोझले थिच्नेछ । खर्च वृद्धि हुदा आर्थिक पक्ष दुर्वल बन्नेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । विश्वास घात हुनसक्छ । जोखिम पूर्ण यात्रा नगर्नु होला ।
कर्कटः– बातावरण अनुकुल नै बन्नेछ । सहास,धैर्यता र पराक्रम बढ्नेछ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन सन्तोषजनक नै हुनेछ । जीवन साथीको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम हुनेछन् । हतारमा गरेका कामबाट कम लाभ हुनेछ । धन सम्पतिको वृद्धि हुने योगछ ।
कन्याः– समयमा सामान्य सुधार आउनेछ । अरुका काममा व्यस्त हुदा आफ्ना काम ओझेलमा पर्ने छन् । अरुको कल्याणमा आफ्नो भविष्य नदेख्नु होला । रोकिएका काम सुचारु हुनेछन् । फलदायी यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । साथी भाईबाट सामान्य सहयोग मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा थोरै प्रगति हुनेछ ।
तुलाः– दिन प्रतिकुल देखिन्छ । स्थिति भङ्ग हुनेछ भने बेस्थिति बढ्नेछ । उपलब्धिको यात्रामा तगारो लाग्नेछ । काम गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नु पर्नेछ । यत्नपूर्वक गरेका कामले पनि पूर्णता पाउने छैन । आस्था र विश्वास घट्नेछ । मानसिक एवं शारीरिक दुर्वलता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ ।
धनुः– काम गर्दा असहज महशुस हुनेछ । आफ्नो लागि जिम्मेबार कोहि हुने छनै आफै बन्नु होला । काम गर्दा धैर्यता र लगनशिलताको खाचो देखिन्छ । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । मुद्धा मामिलामा विजय हात लाग्नेछ । लेनदेन कारोवार गर्दा बढि चनाखो रहनु होला ।
मकरः– अलमलमा नपर्नु होला । एकै चोटी चारैतिर हात नहाल्नु होला । एउटा एउटा चिन्ताले छोड्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । जीवन साथिको सहयोगमा काम गर्दा थोरै सजिलो हुनेछ । विवादित काममा हात नहाल्नु होला । पढाई लेखाईमा थोरै प्रगति हुनेछ ।
कुम्भः– पारिवारिक समस्या बढ्ने छन् । घमण्ड नगर्नु होला,चक्रव्यूमा पर्न सकिन्छ सतर्क रहनुहोला । विना योजना विना तयारी केहि नगर्नु होला । लगनशिल भई गरेका कामबाट थोरै लाभ हुनेछ । परभावको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । राजनैतिक मुद्धामा नअल्झिनु होला ।
मिनः– काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । समयको सदुपयोग गर्नु होला । गरेका काम अधिकाँश सफल हुनेछन् । अरुको भरमा होईन आफ्नै बाहुबलबाट काम सम्पादन गर्नुहोला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । इष्टमित्र,साथि भाईको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठा जोगिने काम हुनेछ ।
नेपाल र मरिससबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर, समझदारीका विशेषताहरु यस्ता छन। →
आजको राशिफल: वि.सं. २०७५ आश्विन ११ गते बिहीबार
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल मंसिर ९ गते। आइतबार। इश्वी सन् २०१८ नोभेम्बर २५ तारिख। नेपाल संवत् ११३९
साप्ताहिक राशिफल (१५-२१ पुस २०७५, डिसेम्बर ३०-जनवरी ५, २०१८)
December 30, 2018 GulfSandesh 0